कति पानी पिउने ? « LiveMandu
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०६:०६
पानी जीवनको आधार हो । स्वास्थका लागि प्रशस्त पानी पिउनु आवश्यक छ ।
यदि तपाईं वजन घटाउनका लागि डाइट प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंका लागि पानी उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । पानीले अक्सिजन र पोषक तत्वलाई शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने मात्र नभई ‘इनर्जी बुस्ट’ गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
तर, ज्यादा पानी पिउनाले तपाईंको डाइट प्लानलाई बेकार गरिदिन पनि सक्छ ।
हाम्रो शरीरमा जुन फ्याट (बोसो) जम्दछ, कहिलेकाहीँ त्यसमा पानीको हिस्सा पनि हुन्छ । यदि तपाईं एकैपटकमा धेरै पानी पिउनुहुन्छ भने तपाईंको मिर्गौलाले त्यो पूरै पानी एकै समयमा बाहिर निकाल्न सक्दैन । र, यो बोसोमा जमेर बस्छ । त्यसैले, एकैपटकमा धेरै पानी पिउनुको साटो थोरै–थोरै गरेर छिनछिनमा पिइराख्नुपर्छ ।
यद्यपि, तपाईंको डाइटमा सोडियम ज्यादा र पोटासियम कम छ भने तपाईंको शरीर ज्यादा पानी ग्रहण गर्न सक्षम हुन सक्छ ।
पिउने पानी शुद्ध नहुँदा पनि तपाईंको डाइट प्लान इफेक्टिभ नहुन सक्छ । पानीमा हुने केही अर्गानिक तत्वले शरीरको वजन बढाइदिन्छ ।
एक व्यक्तिले दिनभरमा कति पानी पिउनुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । यो विभिन्न कुरामा निर्भर रहन्छ । जस्तो कि, तपाईंको वजन, तपाईं रहने वातावरण, तपाईंको काम आदि । गरम वातावरणमा रहने र शारीरिक परिश्रम पर्ने खालका काम गर्नेले ज्यादा पानी पिउनुपर्छ ।
सामान्यतया, महिलाले दिनमा कम्तीमा ३ लिटर पानी पिउनुपर्छ भने पुरुषले थप आधा लिटर पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । तपाईंका लागि कति पानी आवश्यक छ, जान्नका लागि डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । प्रविधिको विकाससँगै सौखिन जीवनशैलीले विश्वका आम मानिसमा मोटोपनको समस्या बढिरहेको छ । कतिपयले मोटो शरीर घटाउन अनेक उपाय
सुत्ने समय घटाउँदै मानिस, विश्वव्यापी समस्या बन्ने खतरा !
काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरूले निद्रालाई बेवास्ता गर्न थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न प्रविधिको आविष्कारसँगै मानिसले आफ्नो सुत्ने
काठमाण्डौस्थित भारतीय राजदूतावासले २०७७ चेत्र १४ गतेका दिन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा “All-Women Hike” को आयोजना गर्यो । ‘महिला तथा बालबालिका
चीनका ६० प्रतिशत युवा ११ बजेपछि मात्रै सुत्छन्ः सर्वेक्षण
बेइजिङ- चीनका ६० प्रतिशत युवा राति ११ बजेपछि मात्रै सुत्न जाने गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । चाइना युथ डेलीले